Minisitry ny Fitsarana : “Mpitsara iray indray no voaroaka sy nakarina fitsarana” | NewsMada
Minisitry ny Fitsarana : “Mpitsara iray indray no voaroaka sy nakarina fitsarana”
Te ho deraina ? Namaly ny fanontanian’ireo loholona ny minisitry ny Fitsarana, omaly momba ny ny asan’ny Filankevitra ambony momba ny mpitsara (CSM). Nambarany tamin’izany ny fisian’ireo mpitsara voasazy.
“Tsy haiko ny milaza azy hoe amim-pifaliana sa amim-pahoriana? Tamin’ny fivorian’ny CSM farany teo, 15-17 jona, maro ny mpitsara niakatra filankevitry ny fifampifehezana tao. Maro ny nahazo fampitandremana, fa nisy anankiray voaroaka”, hoy ny minisitry ny Fitsarana, Andriamiseza Charles, teny amin’ny Antenimierandoholona, Anosikely, omaly. Tsy hoe faly mandroaka, fa niteny ny mpitsara rehetra tao amin’ny CSM fa tena tokony horoahina izy io, araka ny fanazavany. Satria niakatra filankevitry ny fifampifehezana izy, tamin’ny volana septambra, fa nisy tsy nety nataony. Afaka noho ny fisalasalana izy tamin’izany. Iray volana taorian’io: namoafady indray izy, ary voaroaka tsy ho mpitsara.
Akarina fitsarana izay misy ny fandikan-dalàna ara-keloka
Misy miteny hoe tsy tokony ho vitan’ny filankevitry ny fifampifehezana fotsiny io, fa tokony handeha ady heloka ihany koa. Mandeha ady heloka izy io, raha misy fandikan-dalàna ara-keloka. Io farany io izao, nandeha filankevitry ny fifampifehezana izy, voaroaka, ary mandeha koa ny any amin’ny ady heloka noho ny fandikan-dalàna ara-keloka.
Notsiahiviny fa efa nisy mpitsara koa taloha, tsy voasazin’ny filankevitry ny fifampifehezana izy, fa ny fitsarana ady heloka no nandeha taminy.
Mbola eo ihany ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana
Ampy hampiverina ny fitokisan’ny vahoaka ny fitsarana ve izany? Hatramin’izao, ohatra, tsy mitsahatra mitaky ny amin’ny tokony hanajana ny hasina sy ny fahaleovantenan’ny fitsarana ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM).
Mety misy manao ny ataony tokoa ny mpitsara sasany, fa sehatra anisan’ny ahazoana fitarainana be indrindra amin’ny fisian’ny kolikoly ny fitsarana, raha ny tatitry ny Bianco sy ny Afrobaromètre, ohatra. Ahoana kosa ny amin’ireo tomponandraiki-panjakana manao ny fitsarana ho fitaovana politika?